Global Voices teny Malagasy · 2 Marsa 2019
02 Marsa 2019
Tantara tamin'ny 02 Marsa 2019
Angola02 Marsa 2019
Niakatra 97 dolara Amerikana ny saran'ny pasipaoro ao Angola raha 8 dolara Amerikana izany teo aloha.
Maraoka: Nosamborina ilay bilaogera ary nomelohina avy hatrany
Mediam-bahoaka02 Marsa 2019
Notaterin'ny tranonkalam-baovao Hespress fa nosamborina tao an-tranony tao Agadir ilay bilaogera Mohammed Raji . Voalaza fa lahatsoratra iray izay navoakan'i Raji tao amin'ny Hespress no antony kanefa tsy mbola voamarina izany. Voalaza ny harivan'iny fa efa notsaraina sahady i Raji ary nomelohina higadra roa taona sy (vakio ny lahatsoratra)
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana02 Marsa 2019
Iran: Nanajanona ny fitokonany tsy hihinan-kanina ilay bilaogera any am-ponja
Iràna02 Marsa 2019
Nitatitra [fa] ireo tranonkala maromaro fa nanajanona ny fitokonany tsy hihinan-kanina taorian'ny herinandro teo ho eo i Hossein Ronaghi Maleki, bilaogera Iraniana nogadraina. Migadra 15 taona an-tranomaizina ao amin'ny fonjan'i Evin i Hossein